Ọrụ - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Ndị oru ngo na ndị otu na-akwado nkwado otu nwere ihe karịrị afọ ise na ahụmịhe na mpaghara ụgbọ elu karịrị 1500 square kilomita. Iji hụ na nsonaazụ ya, anyị enyerela ndị ọrụ ọ bụla ọrụ igwefoto teknụzụ nke teknụzụ nke Rainpoo mepụtara. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu ọrụ anyị na-arụ ọrụ dị ka ụgbọ elu oblique foto, nhazi usoro 3D, yana ihe eji edozi 3D.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ dịka Survey / GIS / Smart City / Construction / MiningTourism / buildingslọ nchebe oge ochie / Iwu mberede na ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ nhazi 3D, mana ịnweghị akụrụngwa ma ọ bụ ndị nwoke nwere ahụmahụ, anyị nwere ike inyere gị aka mezue ọrụ ndị a na ezi uche price.
Anyị nwere ụyọkọ kọmpụta nwere ihe karịrị otu narị kọmputa ma nwee ike ịhazi ihe karịrị 500,000 n'otu oge.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikwa nnukwu foto foto a, dabere na ịkwado ogo na izi ezi nke ụdị 3D, anyị nwere ike inyere gị aka na nhazi data ahụ na ọnụahịa ezi uche dị na ya.
Companylọ ọrụ anyị nwere ngalaba nkwado igwefoto igwefoto, nke mejupụtara nke ndị ọrụ injinia nkwado anyị nwere ahụmahụ. Ogologo nkwado nkwado nke ndị otu a karịrị afọ 3. Mgbe nnyefe igwefoto ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ anyị ga-ekenye onye ọrụ aka ọrụ ọkachamara na-ahụ maka ndị ahịa ka ha zụọ ojiji nke igwefoto iji hụ na ndị ọrụ ahụ nwere ike iji igwefoto ahụ rụọ ọrụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla metụtara igwefoto, ngalaba na-ahụ maka teknụzụ nwere ike ịnye ọrụ. Na mgbakwunye, ndị ahịa ọ bụla nwere onye njikwa ọrụ otu na otu. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọrụ aka gị, ịnwere ike ịkpọtụrụ onye njikwa ọrụ ndị ahịa mgbe niile, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Nkwado tupu ahịa
Anyị nabatara ngosipụta-ọkpụkpọ oku zuru ụwa ọnụ.Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwefoto anyị na-agbagha agbagha, egbula oge ịkpọtụrụ anyị ma nweta ohere ngosi.
Anyị kwenyere na ngwaahịa dị mma na ndị ọrụ nwere ahụmahụ nwere ike inye ndị ahịa anyị ọrụ zuru oke.
Ahụmahụ onye ọrụ abụwo mgbe a na-elekwasị anya na Rainpoo. Iji zaghachi ngwa ngwa maka mkpa nke ndị ọrụ, Rainpoo eguzobewo usoro nke ire ere, mberede na atụmatụ agbakwunyere iji dozie nsogbu dị iche iche a na-atụghị anya ya ma gboo mkpa nke ndị ọrụ. Ndị ọrụ ọkachamara na-arụ ọrụ igwefoto, ndị ọrụ nkwado teknụzụ, otu nyocha igwefoto, iji hụ na igwefoto ọ bụla mepụtara nke anyị dị elu. Ọ bụ ebighebi ebumnuche nke Rainpoo iji nye ndị ọrụ ngwaahịa na ọrụ kachasị mma.